Ingenceity Mars: astaamaha, halabuurka iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Xariifnimada Mars Waa diyaarad helikobtar caqli leh oo hadafkeedu ugu weyni yahay inuu ku dul duulo meeraha Mars. Miisaankiisu wuxuu gaarayaa oo keliya 1.8 kg, taasoo ka dhigaysa mid fudud oo fudud. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay shuruudo waawayn oo u horseedi lahaa horumar weyn xagga daahfurka caalamka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, hawlgalka iyo muhiimadda ay leedahay Maro-abuurnimada Mars.
2 Dhibaatooyinka maskaxda
3 Awoodaha Maqaar la'aanta Mars
4 Xog xiiso leh
Aan aragno maxay yihiin astaamaha ugu waaweyn ee helikobtar damacsan inuu u safro meera kale. Ingenity Marte wuxuu soo bandhigayaa tikniyoolajiyad casri ah taas oo ka dhigaysa kacaan baaris dhul. Waxay ku salaysnayd mashruuc la doonayo in lagu ansixiyo awood cusub oo leh baaxad kooban. Astaamaha 4 garbaha fiilooyinka kaarboonka oo si gaar ah loo sameeyay oo lagu hagaajiyay laba rotors oo jihooyinka u rogaa ka soo horjeedka xawaaraha 2.400 rpm. Xawaarahan ayaa marar badan ka dheereeya helikobtar rakaab ah oo meeraheena yaal.
Waxa kale oo ku jira unugyo cusub oo qorraxda ku shaqeeya, baytariyado tayo sare leh, iyo waxyaabo kale oo casri ah. Ma sido nooc kasta oo qalab saynis ah tan iyo markii Waa tijaabo ka duwan adkeysiga Mars 2020. Waa diyaaraddii ugu horreysay ee isku dayda duulimaad ay maamusho meera kale. Waana in helikobtarka Ingenuity Mars uu sameyn doono isku daygii ugu horreeyay taariikhda inuu qarxiyo meere kale.
Waxa sii adkeynaya helikobtar inay ka duusho Mars waa jawigeeda khafiifka ah. Tani waxay adkeyneysaa helitaanka wiish kugu filan. Waana in jawiga Mars uu 99% ka cufan yahay meeraha Dunida. Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay inuu noqdo mid iftiin leh, oo uu weheliyo rotor aad u weyn oo rogrogmi kara dhaqso badan waxa looga baahan lahaa helikobtar qaabkan ah ee Dunida.
Sidoo kale waa inaan tixgeliyaa heerkulka meeraha. Waa wax iska caadi ah heerkulka meelaha qaarkood sida ee soo degitaanka ugu yaraan 130 darajo Fahrenheit oo ah -90 darajo Celsius. In kasta oo kooxda Ingenuity Mars ay ansixiyeen heerkulka sidan oo kale ah, waxaa la rumeysan yahay inay tahay inay u qabato si wanaagsan sidii loogu talagalay. Qabowgu wuxuu riixi doonaa xadka naqshadeynta qaybo badan oo ka mid ah helikabtarkaan.
Sidoo kale, xakamaynta duulimaadka JPL ma awoodi doono inuu xakameeyo helikabtarka leh joystick. Dib u dhaca isgaarsiinta waa qeyb ka mid ah hiddaha hawlgalka dayax gacmeedku ka dhex samaynayo masaafada dhexdeeda. Amarada waa in horay loo soo gudbiyaa oo macluumaadka injineernimada laga soo celin doonaa dayax gacmeedka muddo dheer duulimaad kasta. Isla mar ahaantaana, Caqli-darradu waxay yeelan doontaa madax-bannaani badan go'aan ka gaarista sida loogu duulo dariiqa loo maro iyo kuleylka.
Ingenuity Mars waxay horey u soo bandhigtay xoogaa injineernimo ah. Injineeradu waxay muujiyeen inay suurtagal tahay in la dhiso diyaarad fudud oo awood u leh inay soo saarto wiish ku filan jawigan aadka u khafiifka ah ayna ku noolaan karto deegaan la mid ah. Waxay ku tijaabin doonaan qaar ka mid ah moodooyinka horumarsan jilitaanka jilitaanka gaarka ah ee JPL. Kooxda oo dhami waxay tirin doonaan guusha tallaabo tallaabo si ay ula socdaan hadba wixii soo kordha ee la samaynayo.
Awoodaha Maqaar la'aanta Mars
Saynisyahannadu way awoodi doonaan inay u dabaaldegaan mid kasta oo ka mid ah guulaha qalabkan. Taasina waa iyada oo kaliya ka badbaaday bilowga laga bilaabo Cape Canaveral oo ku qarashgareysa dhammaan safarka ilaa Mars ee ku soo degaysa meerahaas, waa durbaba guul. Mar alla markii aad ku sugan tahay meeraha cas, waa inaad si iskiis ah iskaga ilaalisaa naftaada diirimaad inta lagu jiro habeennada Martian ee aadka u qabow. Faa'iidada tan waxaa lagu soo oogi karaa iskiis ahaan iyadoo ay ugu wacan tahay jiritaanka koronto qorrax leh. Haddii helikobtarku ku guuleysto duulimaadkii ugu horreeyay, duulimaadyo tijaabo ah oo dheeri ah ayaa lagu isku deyi doonaa gudaha daaqad qiyaastii ah 30 maalmood oo Martian ah, oo u dhiganta qiyaastii 31 maalmood oo Dunida ah.
Haddii hawlgalkani guuleysto, sahaminta mustaqbalka meeraha cas waxay ku jiri kartaa cabir hawadeed oo hami leh. Waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo in farsamada lagama maarmaanka u ah in lagu duulo jawiga la dhisi karo. Haddii lagu guuleysto, waxay u oggolaan kartaa dhismaha gawaarida kale ee casriga ah ee duulaya ee lagu soo dari karo mustaqbalka robotic iyo howlgalada shaqsiyadeed ee Mars. Waxay sidoo kale bixin karaan barta u gaarka ah ee muuqaalka ah ee aysan bixin maanta orbiters sare.
Thanks to horumarka noocan ah tiknoolajiyadda, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan bixinno sawirro qeexan oo sare iyo aqoonsi loo helo xatooyada dadka, taasoo u oggolaanaysa marin u helidda dhul ay adag tahay rovers inay gaaraan. Dhamaan kooxda Wuxuu isku dayay intii ugu fiicnayd inuu ku tijaabiyo caqli-wanaagga meeraheenna Mars. Muhiimadda waxaas oo dhami waa in wax la barto had iyo jeer si ay u noqoto abaalmarinta ugu fiican oo ay u martigeliso cabbir kale habka aan u sahaminno adduunyo kale mustaqbalka.
Xog xiiso leh
Mars-ka Ingenuity wuxuu ku degi doonaa godka loo yaqaan 'Jezero crater' god ballaciisu yahay 45-kiiloomitir oo ku yaal dusha meeraha casaanka ee cirifka galbeed ee Isidis Planitia, baaxad weyn oo webiga woqooyi ka xigta dhulbaraha Martian. Waagii hore, godkan waxaa laga yaabaa inuu ahaa oasis. Intii u dhaxeysay 3 ilaa 4 bilyan oo sano ka hor, webi ayaa ku fatahay jir biyo ah oo cabirkiisu yahay harada Tahoe ee dalka Mareykanka wuxuuna dhigay haro ay ka buuxaan carbonates iyo macdano dhoobo ah. Kooxda cilmiga Perseverance waxay aaminsan tahay in wabiga qadiimiga ah ee wabiga laga yaabo inuu ururiyey lana keydiyey meydka jirka iyo calaamadaha kale ee nolosha microbial.
In ka badan shan sano, iyada oo loo marayo talaabooyin yar yar, oo siyaado ah, injineerada JPL waxay muujiyeen inay suurtagal tahay in la dhiso qalab khafiifa oo soo saari kara wiish ku filan jawiga khafiifka ah ee Mars. Waxay sidoo kale ku badbaadi kartaa jawiga adag ee dhulka. Nooca ugu dambeeya wuxuu u baahan yahay tijaabinta boqolaal ka mid ah moodooyinka sii kordhaya ee jilitaanka JPL. Haddii mid ka mid ah talaabooyinkan uu guuldareysto, mashruucu wuu fashilmayaa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan xariifnimada Mars, astaamaheeda iyo muhiimadda ay u leedahay aqoonta koonkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Xariifnimada Mars